Retro yekudyira kamuri chandelier Mugadziri, Fekitori, Wholesale - Zvigadzirwa - Dongguan Yisheng Electric Co., Ltd.
Imba > Chandelier yekudyira > Aluminium yekudyira imba chandelier > Retro yekudyira imba chandelier
Mune iyo Macaron dzakateedzana, yega yega kara yakasarudzika uye ruvara runogona kugadzirwa.
1a - Iyo siringi ndiro yakatenderedzwa-padivi, iri nyore kuisa. Iyo siringi ndiro inogona kushandiswa mutema / chena yakajairika mavara, kana iwo iwo iwo iwo mavara seye mwenje muviri, uyo unogona kuve unoenderana maererano nezvinodiwa.
2ã € 1,1 metres refu retro rakarukwa tambo yesimba, uchishandisa zvakatipoteredza zvine hushamwari tsoka tsoka dhirowa dhizaini, kureba kwetamboIyo tambo kureba kunogona kugadziriswa sezvinodiwa.
3ã Muviri wemwenje wakagadzirwa nemhando yepamusoro yealuminium kufa-kukanda, uye mwenje wedenderedzwa wakakomberedza uye hauna kuremara.
4ã € Mwenje unogadziriswa E26 E27, ine moto wakanakisa uye murazvo unodzora mhando.
Hot Tags: Retro yekudyira kamuri chandelier Mugadziri, fekitori, Wholesale